बेपत्ता शिशुहरूमा सुत्न
मातृत्व शिशु एक वर्ष पुरानो
जब बच्चाले घर प्रवेश गर्दछ, परिवारका सबै सदस्यहरूको जीवन पूर्णतया परिवर्तन हुन्छ। कहिलेकाहिँ बच्चाको हेरचाह मात्र बच्चाको महत्त्वपूर्ण कामको अज्ञानताको बारेमा उत्साहजनक भावनाहरू मात्र होइन, नम्रता पनि उत्प्रेरित हुन सक्छ।
आमाबाबुको अशांतिको सबैभन्दा सामान्य कारण बच्चामा बेस्सरी निद्रा हुन्छ। यो केहि छैन कि बच्चाहरु को सबै शिशुहरु बच्चाहरु शिशु को आराम को प्रक्रिया को लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ, बच्चाहरु को नींद विकार गंभीर गंभीर न्यूरोलोजी रोगहरु या आंतरिक अंगहरु को रोगहरुको लागि आवश्यक हुन सक्छ।
बच्चाहरु र उनको उपचार मा नींद विकारहरु को कारण
शिशुहरु को पहिलो केहि हप्ता प्राय: दिन संग रात को भ्रमित गर्दछ, किनकी उनि अझै नींद र जागृति शासन स्थापित नहीं गरेको छ, अंतरराज्यीय राज्य देखि अलग। यसले पर्यावरण परिस्थितिको लागि अनुकूलन र अनुकूलनको उल्लङ्घन गर्दछ। यस अवस्थामा, तपाईं बस पर्खनुहोस्: बच्चाहरु बढ्दै जाँदा नींद विकारहरू आफैले पारित हुनेछन्।
कहिलेकाँही बेस्सरी निद्राले मौसम वा बदलिने दिनको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यस अवस्थामा, निद्रा र जगावय अवधिको उल्लङ्घन ज्वरोकार कारक को पहिलो उन्मूलनमा तुरुन्तै सामान्यकृत गरिन्छ।
जब बच्चा अझै पनि सानो छ, यो प्रायः कालो द्वारा पीडा हुन सक्छ, पुर्खा गर्दछ र यो बच्चा मा बेचैन निद्राको मुख्य कारणहरू हुन सक्छ। कालोको उपचार गर्न असम्भव छ, तपाईं मात्र बच्चाको अवस्था कम गर्न सक्नुहुनेछ: प्रायः आमाको पेटमा राख्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँले न्यानो महसुस गर्नुभयो र सुरक्षित महसुस गर्नुभयो। तपाईं दु: ख कम्प्रेटमा पेट दुख्ने स्थानमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्लैंकटक्सको रूपमा यस्तो औषधि, बच्चा क्रीम, डिल पानी समावेश हुन्छ, पेटको मांसपेशिहरु आराम गर्न र ठिकबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ।
पुरानो उमेरमा, निद्रा बिगबिगीको कारणले हुन सक्छ, सक्रिय खेलहरु को समयमा मधुमेह भन्दा पहिले ओभरटेक्टेड।
नींद अशांतिको लक्षण
सपनाको बेला, बच्चाहरूले यस्तो घटना देखाउन सक्छन्:
ब्रेकिंग विशेष गरी सावधानीपूर्वक हेर्नु पर्दछ, किनकि एक नर्वे सेप्टेको रूपमा यो चीज हो, यसको लागी छोटो श्वसन गिरफ्तारीको विशेषता हो। यस अवस्थामा, बालबालिकाको परामर्श आवश्यक छ।
निद्रा र जागरण सुधार गर्न विधिहरू
नींद विकारहरू पत्ता लगाउने सन्दर्भमा, यो स्पष्ट रूपमा महत्त्वपूर्ण छ कि बच्चाको दिनको कार्यक्रम तयारी गर्न र नींद जाँदै आएको अनुष्ठानको परिचय गराउनु हो। एक घण्टा अघि सुत्न, तपाइँ सक्रिय गेमहरूको संख्या कम गर्न आवश्यक छ, त्यस्ता शासक क्रियाकलापहरूलाई मन परेका कथाहरू पढ्न, तस्विरहरू हेर्न जस्ता मनपर्छ। सुत्नुअघि स्नान गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले तपाईंलाई शरीरमा मनोवैज्ञानिक तनाव हटाउन अनुमति दिन्छ जुन दिनभरि संचित हुन्छ। बच्चाले रमाइलो महसुस गर्छ, शान्त। र स्नानका लागि विशेष जडीबुटीहरूको अतिरिक्त केवल तपस्या प्रभाव बढाइनेछ। बच्चाहरु को कोठा मा स्वच्छ को स्वच्छता र स्वच्छता को बनाए राखन को लागि यो पनि आवश्यक छ। वैज्ञानिकों ले साबित गरेको छ कि एक नया शांत कोठा मा बच्चा अधिक चाँडै सोन्छ र उनको निद्रा भन्दा ठोस छ कि एक भान्सा कोठा मा सो सकेंगे। यसकारण, बिस्तरमा जानुअघि, बच्चा जहाँ सुतिरहेको छान्न को लागी बिल्कुल आवश्यक छ।
केही आमाबाबुले बच्चासँग निद्राको साझेदारी गर्ने तरिकालाई समर्थन गर्छन्। कहिलेकाहीँ यो एउटा डिस्प्ले बिस्तारमा बच्चा आमाको छेउमा भन्दा खराब सुत्दछ। किनकि उसले सुरक्षित महसुस गर्छ, मातृको गर्मी र दूधको गन्धलाई लाग्छ। तिनको निद्रा नै डाक्टरहरु को हस्तक्षेप बिना आफ्नै मा सामान्यता हुन्छ।
यो सम्झना हुनुपर्छ कि बच्चा आमा को अवस्था को लागि धेरै संवेदनशील छ र यसलाई सीधा बच्चा मा अनुमानित छ। यदि आमा तनावको अवस्थामा छ, क्रोध, त्यसपछि बच्चाले असुविधाको भावना अनुभव गर्नेछ र उसलाई नीन राख्न गाह्रो हुनेछ। बच्चाको सेवानिवृत्तिको अवधिमा यो शान्त हुनुपर्छ र आमाबाबुलाई आवश्यक छ ताकि तिनीहरूका मनको शान्ति बच्चामा पारित हुन्छ र चाँडै सुत्नुहुन्छ।
सुत्न अघि, तपाईंले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ: रोशनीहरू बन्द गर्नुहोस् र क्यान्सरमा कुरा गर्नुहोस्। आमा गाई गाउन सक्छ, लुगा लगाउन र आमाको आवाज महसुस गर्न सक्दछ, बच्चाले सुरक्षित महसुस गर्नेछ। र जब बच्चा शान्त छ, त्यहाँ नींद विरूपणको लागि कुनै कोठा छैन।
प्रायः त्यहाँ बच्चाहरु मा बेस्सन्देही निद्रा हुन्छ जुन स्तनपान गर्दछ र जो कि मासु खान्छ। आमाको नजिकता, उनको हेरविचार र प्रेमले बेस्सरी निद्राबाट मुक्त गर्न सक्छ।
नवजात को एनएसएच
छोराछोरीसँग दाँत कहिले हुन्छ?
नवजात मा हृदय असफलता
बच्चालाई कसरी सिकाउन सिकाउनुहुन्छ?
बेबी वालर्स - साना फाइदाहरूको लागि उत्तम मोडेल
बच्चा6महिनाको लागि कम्पन गर्नुहोस्
बेबी मनिटर - कसले छनौट गर्ने?
शिशुहरु मा SARS
6 महिनामा बच्चालाई कति पर्छ?
नवजातको लागि मुस्कान
डायपर मा वेल्क्रो
नयाँ नवजातको निन्द्रा कस्तो हुनुपर्छ?
के बच्चा वाटरहरू बच्चा चाहिन्छ?
नवजातको लागि एमामा
मानिस-मिथुन कसरी फर्किने?
पेट मा फैट - कारणहरु
अक्टोपस किन सपने छ?
स्पोर्ट्स सेतो - जुन अहिले फेसबुकमा छन् र एक स्पोर्टिङ शैलीमा केशहरू लगाउने के साथ?
घर मा झुर्रियाँ देखि मास्क
बोसो जलने को लागि पेय पदार्थ
स्वचालित आगो अलार्म प्रणाली
बच्चालाई दाँत छ भने तपाईं कसरी जान्नुहुन्छ?
8 महिनामा बच्चालाई तिर्न को लागी?
बच्चाहरु जन्मदिन मा बिरालोहरु
कसरी प्लास्टिक प्यानलबाट छत बनाउने?
हिलुरनिक एसिडमा आधारित भित्रीहरू
Fingernail नाखून 2014
उत्पादन जुन कब्जको कारण हो
मेकअप - 2014 पतन
दही संग बखत आटा राम्रो छ
नताल्या वोदानोवाले एक अनौठो परिचितताबारे भने, जसले उनीहरूलाई प्रसन्न बनायो
हात र खुट्टामा राश
आउटडोर कार्यहरुको लागि सजावटी प्लास्टर
ब्रेटर मा झींगा - नुस्खा
कसरी सिर्जना गर्ने पेय?